China Bandage mask fanamboarana sy orinasa | Teknolo-pitsaboana miorina amin'ny porofo Hebei
Ity vokatra ity dia mampiasa sivana telo sosona, izay afaka manilika tsara ireo sombin-bakteria nefa tsy mitazona ny fofonainao ary manakana tsara ny setroka, ny vovobony ary ny vovoka. Fepetahana feno, azo antoka ny vokatra, lamba telo-sosona menaka manelatselatra + ambaratonga fiarovana lamba tsy tenona no avo, avo ny asa sy ny sekoly, miambina hatrany, ny fomban'ny fahavaratra manokana, maivana sy mifoka rivotra, mifanaraka amin'ny tarehy, tsy malalaka, fanoherana ambany , tsy mitazona ny fofonaina, fehikibo sofina avo lenta, mahazo aina ary tsy manenjana ny sofina.
1. Mahafinaritra ny mitafy sy mety amin'ny besinimaro, tsy mitazona ny fofonainao, miaina tsara ary manasaraka ireo poti-bakteria.
2. Afaka manakana amin'ny fomba mahomby ny zavona, vovobony, sigara, poti-bakteria ary zavatra manimba hafa.
3. Sakano ny vongan-vovoka, ny fahalotoana be sivana amin'ny rivotra, mora entina, manify ary mora entina ary afaka manala gazy mamoaka rivotra hiaina rivotra vaovao.
4. Ny vokatra dia tsy manao haingon-trano tsy misy ilana azy, saron-tava matihanina manohitra ny vongan-drongony, asa-tanana ary fiarovana afaka mahasalama ny fiainana.
5. Ny akora vokarin'ny vokatra dia ny lamba mitsoka notsofina, ny lamba tsy vita amin'ny hoditra tsy lafaoro, ny filtration efficace avo lenta, ny endrika V, mety ho an'ny olona manana endrika maro kokoa.
Ny sarontava miaro ny fitsaboana dia mety amin'ny fiarovana ny mpiasa ara-pitsaboana sy ny mpiasa mifandraika amin'izany amin'ny areti-mifindra avy amin'ny rivotra. Izy io dia karazana fanasivanan-tena manakaiky ny fitaovam-piarovana ara-pahasalamana miaraka amin'ny fiarovana avo lenta, mety indrindra amin'ny fihanaky ny rivotra mandritra ny fitiliana sy ny hetsika fitsaboana na rehefa ataon'ny marary voan'ny taovam-pisefoana miparitaka amin'ny vongan-drano eo akaiky eo, io ambaratonga io ny saron-tava dia afaka manivana ireo sombintsombiny amin'ny rivotra ary manakana ireo loto toy ny rano mitete, ra, tsiranoka amin'ny vatana ary tsiambaratelo. Ny fahombiazan'ny filtration an'ny sombin-tsolika tsy misy menaka dia mety hahatratra 95 Ambony% dia mahatratra ny haavon'ny N95, izay fitaovana fiarovan-tena ampiasaina matetika amin'ny aretin'ny rivotra. Izy io dia mety tsara amin'ny endrik'ilay mpitafy ary vokatra ampiasaina indray mandeha. Ny sarontava miaro amin'ny fitsaboana dia afaka misoroka ny ankamaroan'ny pathogens toy ny bakteria sy ny virus. Ny WHO dia nanoro hevitra ny mpitsabo hampiasa sarontava miaro amin'ny zana-pitrandrahana mba hisorohana ny aretina mikraoba amin'ny rivotra hopitaly.
Karazana: Sarontava fitsaboana Ho an'ny olona: Mpiasa mpitsabo na mpiasa mifandraika amin'izany
Malagasy: GB19083-2003 Haavo sivana: 99%
Toerana famokarana: Faritanin'i Hebei Brand: Afaka ny fitiavana
ohatra arahintsika: Earband Karazan-desinfection: Ethylene oxide
habe: 17.5 * 9.5cm Fanamarinana kalitao: Manana
fenitra fiarovana: Saron-tava fandidiana ara-pitsaboana 0469-2011 anaran'ny vokatra: Sarontava fiarovana ara-pitsaboana azo ariana
1. Mampiasà sarontava mba hanaronana tsara ny vava sy ny orona ary afatory mafy izy ireo mba hampihena ny elanelana misy eo amin'ny tarehy sy ny sarontava;
2. Rehefa ampiasaina dia aza mikasika ny saron-tava rehefa avy nikasika ilay saron-tava nampiasaina, ohatra, mba hanala na hanadio ny sarontava, sasao amin'ny savony sy rano ny tanana na ampiasao fanadiovana tanana alikaola;
3. Rehefa avy mando na voaloton'ny hamandoana ny sarontava dia manaova sarontava vaovao madio sy maina;
4. Aza ampiasaina indray ny saron-tava azo ampiasaina. Ny saron-tava azo ariana dia tokony ariana isaky ny ampiasaina.
1. Tsy maintsy soloina ny sarontava fitsaboana ankapobeny aorian'ny fampiasana 4 ora ary tsy azo ampiasaina intsony; ary raha manipy fako fotsiny ianao ao ambany ary tsy mikasika olon-kafa, dia azonao atao ny mametraka ilay sarontava amin'ny toerana misy rivotra sy maina ary madio, na mametraka azy amin'ny toerana madio. , Ao anaty kitapo taratasy misy rivotra azo ampiasaina indray.
2. Rehefa mametraka ny sarontava dia tsara kokoa ny mitahiry azy mitokana ary manondro ilay olona mampiasa azy io mba hisorohana ny hafa tsy handray azy io ary hampiasa azy io tsy nahy, ka ahiana voan'ny tsimokaretina.
3. Ho an'ny sarontava amin'ny fandidiana ara-pitsaboana, tsy azo ampiasaina amin'ny famonoana otrikaretina ny otrikaretina, alikaola, sns, ary betsaka kokoa aza no tsy hosasana amin'ny rano. Aorian'ny fampiasana azy dia ataovy ao anaty kitapo na fitoeram-pako ho an'ny saron-tava ara-pitsaboana.
4. Ho an'ny saron-tava landihazo dia afaka manadio sy mamono otrikaretina isika. Raha azo atao dia asaina mampiasa hazavana ultraviolet ianao amin'ny famonoana otrikaretina.
Manaraka: Saron-tava an-tsofina